चारजना सचिवमा बढुवा - bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > चारजना सचिवमा बढुवा
१८ असार २०७८, शुक्रबार ०९:४४ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । नेपाल सरकाले चार जनालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वरिष्ठ सहसचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, डो. दामोदर रेग्मी, प्रमिला बज्राचार्य र डा. कृष्णप्रसाद आचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले उनीहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो। कृषि तथा वन सेवातर्फ वरिष्ठ सहसचिव डा। आचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो । बढुवा समितिले कृषि तथा वन सेवा तर्फ वरिष्ठ सहसचिवत्रय डा। प्रसाद आचार्यसहित निरु दाहाल पाण्डे र दीपक खरालको नाम सिफारिस गरेको थियो।
पाण्डेसहित मधुसुधन बुर्लाकोटी र कृष्णहरी पुष्करको नाम सिफारिस गरेको थियो। डा। रेग्मीको हकमा उनको मात्रै सिफारिस भएको थियो। यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
फेरी प्रधानमन्त्री बन्न जालझेल नगर्नु : एमाले बरिष्ठ नेता नेपाल १८ असार २०७८, शुक्रबार ०९:४४
पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार १ शय ६ जना संक्रमित थपिए, थप २३ जनाको मृत्यु, निको हुनेको संख्या १ हजार ९ शय १६ १८ असार २०७८, शुक्रबार ०९:४४
अबको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर देखाउँछौँ : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली १८ असार २०७८, शुक्रबार ०९:४४
बङ्गलादेशमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित भेटिने क्रम बढ्दै गएपछि लकडाउनमा थप कडाइ १८ असार २०७८, शुक्रबार ०९:४४
दोलखा जिल्ला मै पहिलो पटक दोलखा स्वास्थ्य चौकि दोलखालाई पोषण मैत्रि स्वास्थ्य संस्था घोषणा १८ असार २०७८, शुक्रबार ०९:४४